Refurbished ဖုန်းတွေဆိုတာဘာလဲ? Refurbish ဖုန်းတွေကို ဝယ်သင့်လား?? – DigitalTimes.com.mm
2353 Shares 1040 Views
Refurbished ဖုန်းတွေဆိုတာဘာလဲ? Refurbish ဖုန်းတွေကို ဝယ်သင့်လား??
ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတိုင်းကတော့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုယ်စီကိုယ်စီကိုင်နိုင်နေကြပါပြီ။ သာမန်ဖုန်းခေါ်ရုံ စာပို့ရုံလောက်ဆိုရင်တော့ ဘာဖုန်းပဲနေနေအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်တွေမြင့်လာတဲ့အခါ ဈေးတွေလည်းပိုကြီးလာပါတယ်။ ဒီတော့ ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးဝယ်တော့မယ် ပိုက်ဆံလည်းချွေတာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မနှစ်ကမော်ဒယ်လ်တစ်ခုခုကိုရွေးရင်ရွေး ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ refurbish လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေကိုရွေးလို့ရပါတယ်။
“Refurbish” ဖုန်းတွေဆိုတာကတော့ မူလဝယ်တဲ့သူကစိတ်ပြောင်းသွားလို့ဖြစ်စေ ဖုန်းမှာအမှားအယွင်းတစ်ခုခုပါလို့ဖြစ်စေ ပြန်သွင်းလာတဲ့ဟန်းဆက်တွေကိုခေါ်ပါတယ်။ ဒီဟန်းဆက်တွေကို အမှားအယွင်းရှိမရှိစစ်ဆေး၊ ဘက်ထရီကောင်းကောင်းလုပ်မလုပ်၊ ပါဝါအသံခလုတ်တွေကောင်းမကောင်း၊ ကင်မရာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သလားမလုပ်သလား အကုန်စစ်ဆေး၊ လိုအပ်သမျှတွေပြင်ဆင်ပြီး ရှိသမျှဒေတာတွေအကုန်ရှင်းပြီးရင်တော့ အသစ်တစ်လုံးတစ်လုံးအတိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ။
ဘာလို့ refurbished ဖုန်းတွေကိုရွေးသင့်သလဲ?
အဓိကကတော့ ပိုက်ဆံချွေတာနိုင်ပါတယ်။ သုံးပြီးသားဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်တာနဲ့ အသစ်အတိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ သုံးရတာချင်းမတူပါဘူး။ သုံးပြီးသား second-hand ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်တယ်ဆိုရင် ဖုန်းမှာပါတဲ့ အမှားတွေ error တွေက ကိုယ့်ဆီရောက်လည်းရှိနေဦးမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် refurbish ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မလုပ် သေချာအောင်စစ်လို့ရတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။
Refurbished phone တစ်လုံရဲ့အသွင်အပြင်က?
(ညာဘက်က ဝယ်ပြီးအသစ်စက်စက်ဖောက်ထားတဲ့ဖုန်းလေးပါ။ ဘယ်ဘက်ကတော့ refurbished model ပါ)
တကယ်လို့ refurbished ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဖုန်းရဲ့အသွင်အပြင်ကို ကိုယ်တိုင်လည်းခွဲခြားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Grade A အဆင့်ဆိုရင် ဘာအမှတ်အသား အစွန်းအထင်းမှမပါဘဲ လုံးဝအသစ်စက်စက်ဖုန်းတစ်လုံးလိုကိုဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဈေးကတော့ အသစ်စက်စက်တစ်လုံးဝယ်တာထက် တော်တော်ကြီးကိုသက်သာပါတယ်။
နောက်အားသာချက်တစ်ခုက refurbish ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပြီးပြီ ဒါပေမယ့်စိတ်တိုင်းမကျဘူးဆိုရင် နိုင်ငံခြားမှာတော့ Quick Mobile Fix တို့လိုကုမ္ပဏီကြီးတွေက ၁၄ရက်တွင်းငွေပြန်လဲပေးပါတယ်။ ဒီတော့စိတ်ချချနဲ့ဝယ်လို့ရတာပေါ့။ နောက်ပြီး တချို့ iPhone ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကိုင်လာတယ် နောက် Android ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ် ဒါပေမယ့် OS ၂ခုကမတူတော့သုံးရမလွယ် ဒါမျိုးဆိုရင်လည်း မြန်မြန်လွယ်လွယ်ပြန်သွင်းလို့ရပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဖုန်းကိုတော့ကြိုက်ပေမယ့် လဲချင်သေးတယ်ဆိုရင် ရက်၃၀အတွင်းပြန်လဲလို့ရပါတယ်။
refurbish ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်လိုက်ခြင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးအားသာချက်တွေထဲကတစ်ခုက network ကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူး။ အများစုကတော့ unlock လုပ်ပြီးသားဖုန်းတွေဖြစ်လို့ network တိုင်းနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တဲ့အခါ စာချုပ်တစ်ခုရဲ့သက်တမ်းက ၂နှစ်ဒါမှမဟုတ် အဲ့ထက်လည်ပိုကြာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် unlock ဖုန်းတွေရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကတော့ စာချုပ်နဲ့ကန့်သတ်ချက်မရှိတာပါ။
သုံးပြီးသားဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်ရင်တော့ သူပေးထားသလောက် ကျန်တဲ့အာမခံသက်တမ်းလောက်ကိုပဲရမှာပါ။ refurbish မော်ဒယ်လ်တွေကတော့ ဖုန်းမော်ဒယ်လ်အမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီး ရက် ၆၀ ကနေ ၁နှစ်အထိရှိတဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ သေချာပြင်ဆင်ပြီးမှပြန်ရောင်းတဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားအယွင်းနည်းတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်အပြစ်အနာအဆာပါလာခဲ့ရင်တောင် သူတို့ဘက်ကပြန်ပြင် ပြန်အစားထိုးပေးပါတယ်။
Refurbished ဖုန်းတွေနဲ့ အသစ်စက်စက်ဖုန်းတွေကြားက တခြားသောခြားနားချက်တွေက?
အသစ်အတိုင်းပြန်ပြင်ထားတဲ့အတွက် သိပ်တော့ကွာခြားချက်မရှိပါဘူး။ ဈေးကတော့ပိုနည်းတာ ကျိန်းသေပါ။ ဒါပေမယ့် တန်ဆာပလာတွေ ဥပမာ နားကြပ်ဘာညာအစုံပါသလားတော့ တစ်ချက်စစ်ရုံပါပဲ။
တကယ်တော့ refurbish ဖုန်းတွေဆိုတာ အသစ်စက်စက်တစ်လုံးမဝယ်ချင်တဲ့သူတွေ ဘတ်ဂျတ်ချွေတာချင်တဲ့သူတွေ ရွေးတတ်ကြတဲ့ဖုန်းမျိုးပါ။ feature တွေရော ဖုန်းကရော အသစ်စက်စက်အတိုင်းပဲ သုံးရတဲ့အတွက် spec မြင့်တာလည်းကိုင်ချင် ဘတ်ဂျတ်လည်းသက်သာချင်တဲ့သူတွေအတွက် မျက်စိကျစရာဖုန်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနခေ့တျေမှာလူတိုငျးကတော့ မိုဘိုငျးလျဖုနျးတဈလုံးကိုယျစီကိုယျစီကိုငျနိုငျနကွေပါပွီ။ သာမနျဖုနျးချေါရုံ စာပို့ရုံလောကျဆိုရငျတော့ ဘာဖုနျးပဲနနေအေဆငျပွပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့အဆငျ့တှမွေငျ့လာတဲ့အခါ ဈေးတှလေညျးပိုကွီးလာပါတယျ။ ဒီတော့ ဖုနျးအသဈတဈလုံးဝယျတော့မယျ ပိုကျဆံလညျးခြှတောခငျြတယျဆိုရငျတော့ မနှဈကမျောဒယျလျတဈခုခုကိုရှေးရငျရှေး ဒါမှမဟုတျရငျတော့ refurbish လုပျထားတဲ့ဖုနျးတှကေိုရှေးလို့ရပါတယျ။
“Refurbish” ဖုနျးတှဆေိုတာကတော့ မူလဝယျတဲ့သူကစိတျပွောငျးသှားလို့ဖွဈစေ ဖုနျးမှာအမှားအယှငျးတဈခုခုပါလို့ဖွဈစေ ပွနျသှငျးလာတဲ့ဟနျးဆကျတှကေိုချေါပါတယျ။ ဒီဟနျးဆကျတှကေို အမှားအယှငျးရှိမရှိစဈဆေး၊ ဘကျထရီကောငျးကောငျးလုပျမလုပျ၊ ပါဝါအသံခလုတျတှကေောငျးမကောငျး၊ ကငျမရာကောငျးကောငျးအလုပျလုပျသလားမလုပျသလား အကုနျစဈဆေး၊ လိုအပျသမြှတှပွေငျဆငျပွီး ရှိသမြှဒတောတှအေကုနျရှငျးပွီးရငျတော့ အသဈတဈလုံးတဈလုံးအတိုငျးဖွဈသှားပါပွီ။
ဘာလို့ refurbished ဖုနျးတှကေိုရှေးသငျ့သလဲ?
အဓိကကတော့ ပိုကျဆံခြှတောနိုငျပါတယျ။ သုံးပွီးသားဖုနျးတဈလုံးကိုဝယျတာနဲ့ အသဈအတိုငျးပွနျလညျပွငျဆငျထားတဲ့ဖုနျးတဈလုံးနဲ့ သုံးရတာခငျြးမတူပါဘူး။ သုံးပွီးသား second-hand ဖုနျးတဈလုံးကိုဝယျတယျဆိုရငျ ဖုနျးမှာပါတဲ့ အမှားတှေ error တှကေ ကိုယျ့ဆီရောကျလညျးရှိနဦေးမှာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ refurbish ဖုနျးတဈလုံးကိုဝယျတယျဆိုရငျတော့ ကောငျးကောငျးအလုပျလုပျမလုပျ သခြောအောငျစဈလို့ရတဲ့နရောတှရှေိပါတယျ။
Refurbished phone တဈလုံရဲ့အသှငျအပွငျက?
(ညာဘကျက ဝယျပွီးအသဈစကျစကျဖောကျထားတဲ့ဖုနျးလေးပါ။ ဘယျဘကျကတော့ refurbished model ပါ)
တကယျလို့ refurbished ဖုနျးတဈလုံးကိုဝယျတော့မယျဆိုရငျ ဖုနျးရဲ့အသှငျအပွငျကို ကိုယျတိုငျလညျးခှဲခွားလို့ရနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ Grade A အဆငျ့ဆိုရငျ ဘာအမှတျအသား အစှနျးအထငျးမှမပါဘဲ လုံးဝအသဈစကျစကျဖုနျးတဈလုံးလိုကိုဖွဈနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့ ဈေးကတော့ အသဈစကျစကျတဈလုံးဝယျတာထကျ တျောတျောကွီးကိုသကျသာပါတယျ။
နောကျအားသာခကျြတဈခုက refurbish ဖုနျးတဈလုံးဝယျပွီးပွီ ဒါပမေယျ့စိတျတိုငျးမကဘြူးဆိုရငျ နိုငျငံခွားမှာတော့ Quick Mobile Fix တို့လိုကုမ်ပဏီကွီးတှကေ ၁၄ရကျတှငျးငှပွေနျလဲပေးပါတယျ။ ဒီတော့စိတျခခြနြဲ့ဝယျလို့ရတာပေါ့။ နောကျပွီး တခြို့ iPhone ကိုနှဈပေါငျးမြားစှာကိုငျလာတယျ နောကျ Android ဖုနျးတဈလုံးဝယျလိုကျတယျ ဒါပမေယျ့ OS ၂ခုကမတူတော့သုံးရမလှယျ ဒါမြိုးဆိုရငျလညျး မွနျမွနျလှယျလှယျပွနျသှငျးလို့ရပါတယျ။ ဒါ့ပွငျ ဖုနျးကိုတော့ကွိုကျပမေယျ့ လဲခငျြသေးတယျဆိုရငျ ရကျ၃၀အတှငျးပွနျလဲလို့ရပါတယျ။
refurbish ဖုနျးတဈလုံးကိုဝယျလိုကျခွငျးရဲ့ အကောငျးဆုံးအားသာခကျြတှထေဲကတဈခုက network ကနျ့သတျခကျြမရှိပါဘူး။ အမြားစုကတော့ unlock လုပျပွီးသားဖုနျးတှဖွေဈလို့ network တိုငျးနဲ့အလုပျလုပျနိုငျပါတယျ။ တခြို့နိုငျငံတှမှောတော့ ဖုနျးတဈလုံးဝယျတဲ့အခါ စာခြုပျတဈခုရဲ့သကျတမျးက ၂နှဈဒါမှမဟုတျ အဲ့ထကျလညျပိုကွာတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ unlock ဖုနျးတှရေဲ့အားသာခကျြတဈခုကတော့ စာခြုပျနဲ့ကနျ့သတျခကျြမရှိတာပါ။
သုံးပွီးသားဖုနျးတဈလုံးကိုဝယျရငျတော့ သူပေးထားသလောကျ ကနျြတဲ့အာမခံသကျတမျးလောကျကိုပဲရမှာပါ။ refurbish မျောဒယျလျတှကေတော့ ဖုနျးမျောဒယျလျအမြိုးအစားကိုလိုကျပွီး ရကျ ၆၀ ကနေ ၁နှဈအထိရှိတဲ့ဖုနျးတှလေညျးရှိပါတယျ။ သခြောပွငျဆငျပွီးမှပွနျရောငျးတဲ့ဖုနျးတှဖွေဈတဲ့အတှကျ အမှားအယှငျးနညျးတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျအပွဈအနာအဆာပါလာခဲ့ရငျတောငျ သူတို့ဘကျကပွနျပွငျ ပွနျအစားထိုးပေးပါတယျ။
Refurbished ဖုနျးတှနေဲ့ အသဈစကျစကျဖုနျးတှကွေားက တခွားသောခွားနားခကျြတှကေ?
အသဈအတိုငျးပွနျပွငျထားတဲ့အတှကျ သိပျတော့ကှာခွားခကျြမရှိပါဘူး။ ဈေးကတော့ပိုနညျးတာ ကြိနျးသပေါ။ ဒါပမေယျ့ တနျဆာပလာတှေ ဥပမာ နားကွပျဘာညာအစုံပါသလားတော့ တဈခကျြစဈရုံပါပဲ။
တကယျတော့ refurbish ဖုနျးတှဆေိုတာ အသဈစကျစကျတဈလုံးမဝယျခငျြတဲ့သူတှေ ဘတျဂတျြခြှတောခငျြတဲ့သူတှေ ရှေးတတျကွတဲ့ဖုနျးမြိုးပါ။ feature တှရေော ဖုနျးကရော အသဈစကျစကျအတိုငျးပဲ သုံးရတဲ့အတှကျ spec မွငျ့တာလညျးကိုငျခငျြ ဘတျဂတျြလညျးသကျသာခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ မကျြစိကစြရာဖုနျးတှဖွေဈခဲ့ပါတယျ။
မျက်မှန်တပ်ရခြင်းကိုအဆုံးသတ်သွားစေမယ့် nanoparticle မျက်စဉ်းရည်
NEWS, Softwares & Application, Tech Update
မောင်းသူမဲ့ တင့်ကားနဲ့ တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းများ ဖန်တီးနေတဲ့ ရုရှား
ရုရှားက စက်ရုပ် စစ်သားများကို ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ဗီဒီယိုတစ်ခုကနေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ကရင်မလင်က မျှဝေလိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုမှာ ရုရှားရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် ဒရုန်းနည်းပညာကို ပြသထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မောင်းသူမဲ့ တင့်ကားကို မြင်ရပါတယ်။ တင့်ကားဟာ သူ့ဘေးမှ စစ်သားရဲ့ သေနတ် ချိန်ရွယ်ရာ…
141 shares67 views
48 shares25 views
456 shares169 views
274 shares106 views
99 shares78 views